Fanefitry ny polio : Zaza maherin’ny 1 750 000 no hatao vaksiny -
AccueilSosialyFanefitry ny polio : Zaza maherin’ny 1 750 000 no hatao vaksiny
01/12/2017 admintriatra Sosialy 0
Hanomboka ny 6 hatramin’ny 8 desambra ho avy izao any amin’ny faritra 15 eto Madagasikara ny fanatanterahana ny vaksiny fanefitry ny lefakozatra ary any Kandreho, faritra Betsiboka no hanokafana izany amin’ny fomba ofisialy. Vaksiny tanterahina isaka ny enim-bolana izy io, ary andiany faha-11 ity hatao ity. Marihina moa fa ny fahitana ny tsimok’aretina Polio teto amintsika no antony hamerimberenana azy io mba hamongorana izany tanteraka eto amintsika. Hitohy amin’ny herinandron’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza izany, amin’ny fanomezana vitamine A, izay hanomboka ny faha-11 ka hatramin’ny 15 ny volana desambra. Mahakasika ny tsimok’aretina lefakozatra izay hatrany, dia fantatra fa zaza miisa 11 no voan’ny aretina hatramin’ny taona 2014, raha ny fitiliana avy teny amin’ny Institut Pasteur de Madagascar. Ankizy latsaka ny 5 taona manodidina ny dimy alina sy fito hetsy sy iray tapitrisa mahery no vinavinaina hatao vaksiny amin’ity andiany faha-11 ity amin’ny distrika miisa 104, eny anivon’ny fokontany 20 760, araka ny fanambaran’ny minisiteran’ny Fahasalamana sy ny Unicef, omaly.
Fantatra moa fa ny zanaky ny eny anivon’ny fokontany ihany no hanao ny vaksiny mba hanalana izay mety ho tahotra eny amin’ny isam-pokontany any. Mba hialana amin’ny savorovoro toa ny fanelezena tsaho nataon’ny olona momba ny vaksinin’ny pesta, ary izay indrindra no hanentanana ny ray aman-dreny dieny izao fa hiditra amin’ny vaksiny tena izy ny minisitera, ka tsy misy tokony atahorana. Mbola nomarihin’ny tale misahana ny fandaharan’asan’ny vaksiny eny anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, omaly, Dr Emihangy Lahimasy fa tsy misy ny vaksinin’ny pesta, fa vaksiny ny poliomyélite no misy. “Tsy misy izany vaksinin’ny pesta izany fa vaksinin’ny polio no misy. Vaksiny efa ataontsika isaka ny enim-bolana, izay vaksiny atete am-bava. Manentana ireo ray aman-dreny ny minisitera, ary manamafy fa tsy misy ny vaksinin’ny pesta. Ny vaksiny polio hatao eto dia azo antoka satria mandalo fitiliana avokoa ireo fanafody miditra eto Madagasikara”, hoy hatrany ny fanazavany.
Marihina fa tsy misy ny fitsaboana ny lefakozatra fa raha sanatria voan’ity aretina ity dia efa takaitra mandrakizay, ka izay no antony hanaovana ny vaksiny. Nambara fa isaka ny vaksiny atao dia tsy maintsy misy fanefitra ny polio manaraka azy, araka ny fanazavana nataon’ny tale misahana ny fampiroboroboana ny fahasalamana, Dr Rakotoarivony Manitra. “Ka izay no tiako ahatongavana hoe, mila miverimberina io vaksiny polio io fa raha tsy izany tsy mandaitra, indrindra fa misy valanaretina poliomiélyte eto Madagasikara. Ny zaza latsaka ny dimy taona no tena hanaovana azy.”
cot co inox 304 dans Atsimondrano-BASY KILALAO NANAFIHANA TOKANTRANO
cot co inox 304: Wow, this piece of writing is good, my sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going…